खाद्यपदार्थ राखेको खोलबाट कोरोनाभाइरस सर्ने खतरा कति हुन्छ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
खाद्यपदार्थ राखेको खोलबाट कोरोनाभाइरस सर्ने खतरा कति हुन्छ?
२०७७, ७ भाद्र आईतवार १५:२५ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । हालै चीनमा विदेशबाट आयात गरी चिस्यानमा भण्डारण गरिएका झिँगे माछा र कुखुराको मासु राखिएको खोलमा कोरोनाभाइरसको अवशेष फेला परेको विवरण आयो। यसले खाद्यपदार्थ राख्न प्रयोग गरिने खोलबाट कोरोनाभाइरस सर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न फेरि उत्पन्न भएको छ।
सम्भावना कति छ?
सिद्धान्तत: खाद्यपरदार्थ प्याक गर्ने सामग्रीबाट कोभिड-१९ सर्ने सम्भावना हुन्छ। प्रयोगशालामा आधारित अध्ययनहरूका अनुसार खाद्यवस्तु राख्न प्रयोग हुने धेरै किसिमका प्लास्टिक र कागजका केही सामग्रीमा भाइरस धेरै दिनसम्म नभए पनि घण्टौँसम्म भने बाँच्न सक्छ। कम तापक्रममा भाइरस थप स्थिर रहन सक्छ र त्यसरी कम तापक्रममा राखेर नै धेरै खानेकुराहरू एक ठाउँबाट अन्यत्र पुर्‍याइन्छ। यद्यपि केही वैज्ञानिकहरूले भने प्रयोगशालाबाहिर पनि यस्तै परिणाम आउन सक्नेबारे प्रश्न उठाएका छन्।
प्याकिङको काम गर्ने ठाउँमा कामदारले सङ्क्रमित ठाउँमा छोएर नाक मुख र आँखामा त्यही हातले छुँदा सङ्क्रमण सर्ने खतरा बढी हुने अनुमान गरिन्छ। वैज्ञानिकहरू भने अहिले कोभिड-१९ सर्ने यो मुख्य तरिका नभएको ठान्छन्।
“भाइरस भएका कुनै सामान वा भुइँ छुँदा त्यसबाट मानिसलाई कोभिड-१९ सर्ने सम्भावना छ,” अमेरिकी स्वास्थ्य निकाय सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोलले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ। तर उसले थपेको छ, “भाइरस फैलिने मुख्य तरिका नै यही हो भन्ने चाहिँ ठानिँदैन।” व्यक्तिबाट व्यक्तिमा निम्न लिखित तरिकाबाट सर्ने र फैलिने बताइन्छः
प्याक गर्दा नै कुनै व्यक्तिलाई भाइरस सर्‍यो भन्ने प्रमाणित गर्न गाह्रो हुने डा. ट्याङ बताउँछन्। खानेकुरा पोको पार्दा नै सङ्क्रमण भएको हो भन्ने कारण पत्ता लगाउनका लागि त्यो व्यक्ति अन्य कुनै ठाउँमा गएको छैन वा उसले सम्भावित ठाउँमा छोएको छैन र लक्षण नभएका व्यक्तिहरू नजिक पनि पुगेको छैन भन्ने यकिन हुनुपर्छ।
यदि सामान ढुवानी गरिदिने मानिसले सरसफाइमा राम्ररी ध्यान दिएको छ भने त्यसरी सामान ल्याउनु सुरक्षित हुन्छ। तर उसले ल्याइदिएका सामान आफूले लिएपछि हात राम्ररी धुनुपर्छ। केही विज्ञहरूले भने प्लास्टिकको झोला एक पटकमात्रै प्रयोग गर्न पनि सुझाएका छन्। बीबीसीबाट